[Tribune] နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တူနီးရှား: com သည့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံဦးသေဆုံးသောအခါ - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » မူဝါဒ "[Tribune] နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တူနီးရှား: com သည့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံဦးသေဆုံးသောအခါ - JeuneAfrique.com
နိုင်ငံရေးထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာအာကာသနှင့်ဆက်သွယ်ရေးထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအာကာသကျင်းပဘယ်တော့မှထားပါတယ်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဘယ်တော့မှမ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာသို့မဟုတ်ဝဘ်မှတဆင့်မူဝါဒများသူတို့ကိုဆီသို့ဦးတည်မယုံကြည်မှုများတဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်ထားပါတယ်သကဲ့သို့, နေရာတိုင်းလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ရှစ်နှစ်တော်လှန်ရေးပြီးနောက်အတိုက်အခံမျှော်လင့်ချက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား disenchantment ဖို့လမ်းပေးထားတယျ။ အကြမ်းဖက်ဝါဒ, စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း, Bern အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အစိုးရများလက်တဆုပ်စာလူဦးရေအားဖြင့်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံဟောင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှနှိုင်းယှဉ်တစ်အခြေတည်စဒီမိုကရေစီ bedridden တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပါပြီ။ မှော်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ကတိပေးထား
ဒီမီဒီယာလွှတ်ပေးရန် whirlpool နှင့်မိန့်ခွန်းတွင်နိုင်ငံရေး, ဆက်သွယ်ရေးအာဏာစားပွဲဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဟောငျးကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် accessory, ထိုအာဏာကိုရှာသောသူအဘို့မရှိမဖြစ်လက်နက်ဖြစ်လာပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲတုန်လှုပ် 2011 နှင့် 2014 စစ်ဆကျသှယျမှုရှိခဲ့ကြပြီ။ အဘယ်သူမျှမကပိုကြီးမားတဲ့ပညာရေးအပေါ်မေးခွန်းများကို, ကျန်းမာရေး, စိုက်ပျိုးရေး, ဂေဟဗေဒ, စွမ်းအင်အကူးအပြောင်း, အာဖရိကသမဂ္ဂ၏အနာဂတ် ... အိုင်ဒီယာ၏ဆွေးနွေးငြင်းခုံ? နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး၏ပထမဦးဆုံးသားကောင်။
အဆိုပါပုံရိပ်ကြောင့်အံ့သြစရာမဟုတ်, "အပြစ်တွေတဲ့ကိစ္စ" ဖြစ်ပါတယ် Nabil Karoui တစ်ဦးမီဒီယာလုပ်ငန်းရှင်ကြီး နှင့်ဆက်သွယ်ရေး, လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးရည်ရွယ်ချက်များ၏ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ထိပ်မှာ installed လိမ့်မည်။ သဘောတရားသို့မဟုတ် program တစ်ခုကအဆင်းရဲဆုံးလူမှုရေးအလွှာ, ကျေးလက်အမျိုးသမီးများနှင့်သူတို့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကွင်းဆက်၏စာမတတ်သူ, ချုပ်ပစ်မှတ်ကမျက်နှာသာပေးလျက်ရှိသည်အဘယ်သူမျှမ ပရဟိတလုပ်ငန်းကို တူရကီဆပ်ပြာအော်ပရာနှစ်ခုဖြစ်စဉ်များအကြား။ အဆိုပါဗန်းတွင်, Karoui ရော်ဘင် hood ကိုကစား စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဖြန့်ဝေဖို့မြို့များမှယူသောသူသည်။ အဆိုပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်က၎င်း၏မီဒီယာမူဝါဒကဖိုရမ်တစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ Nessma TV ပေါ်မှာ, Karoui ၏ဂုဏ်သတင်းကိုပြိုင်ဘက်သို့မဟုတ်မဟာမိတ် လုပ်. unmade ဖြစ်ပါတယ်။
Aich Tounsi ကြော်ငြာနေရာဝယ်ယူအတွက်သုံးစွဲသန်းပေါင်းများစွာ dinars နှင့်အတူနိုင်ငံသားများ၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌လိုအပ်
ပန်းကန်ပြားပျံကတိတော်များမှနောက်ထပ် Neo-လူထုကြိုက်အစွန်းရောက်ပြောင်းလဲမှုရှုခင်းသို့အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်မျက်နှာဖုံးအသင်း Aich Tounsi နောက်ကွယ်မှတိုးတက် ကြော်ငြာနေရာဝယ်ယူအတွက်သုံးစွဲ dinars လေဖြတ်အတွက်နိုင်ငံသားများ၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌လိုအပ်နေပါသည်။ Facebook က၏ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်အကြံပြုစာပမြေားဖျော်ဖြေရေး infomercial သို့ scripted နှင့်အသွင်ပြောင်း: အဘယ်သူမျှမတိုကျခိုကျမှုကိုလွတ်နိုင်ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ "အသင်းအဖွဲ့" အောက်တိုဘာလ6၏ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အမတ်နေရာများစွာရယူရန်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်း။
ပဋိပက္ခ: ဒါပေမယ့်ဂန္ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအမြဲတမ်းကုန်သွယ်မှုအဟောင်းကိုလှည့်ကွက်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။ Abir Moussi Excel ။ အစိုးရဟောင်း၏ဆိုငျရာအစအနရှိရှိ, သူမတစ်ဦးအစွန်းရောက်ဟောပြောချက်၌မှီဝဲနှင့်အတူမီးမောင်းထိုးသူမ၏အရပ်ဌာနကိုဆုတ်။ , Trump, Salvini သို့မဟုတ် Le Pen ရဲ့ style မှာတော့သူမခွဲစိတ်, ပက်ပက်စက်စက်ပုံသေနည်း verb ။ သည်မီဒီယာအသွင်အပြင်ရရှိသွားတဲ့။
ဒီကနိုင်ငံရေးပွဲတော်အတွက်, မဲဆန္ဒရှင်များ၏အသံတစ်သံတစ်စိတ်ညစ်စရာတာဝန်ဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါအလွန်အကျွံနှင့် bashing ထို့နောက်ကယျတငျတျောမူထူးခြားသောပျဉ်ပြားများကိုပြသထားပါသည်။ အဘယ်သူမျှမကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟာဖွယ်ရာကိစ္စနှမြောခဲ့သည်။ အားလုံးသို့မဟုတ် "အစ္စလာမ္မစ် sleepers" "ဣသရေလအမျိုး၏ henchmen ။ " နေ့တိုင်း disinformation ဆိုတဲ့စကားလုံး၎င်း၏ဝေစု။ Facebook မှာတွင်, Photoshop ကို Montage အများပြည်သူဆွေးနွေးငြင်းခုံရှုတ်။ အဆိုပါကျည်ဆန်မှန်လက်အောက်တွင်နိုင်ငံသားများနှင့်မူဝါဒအကြားပျက်စီးလွယ်သောယုံကြည်မှုကိုချိုးဖျက်ဖို့ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိပါသည်။ "ဆဲရေးတတ်, ကဲ့ရဲ့ခြင်း, အစဉ်မပြတ်တစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်" ဟု Francis Bacon ဆယ်ခုနစ်ရာစုအတွင်းကရေးသားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အဲဒီမှာအမြဲရှိပါတယ်။
ထိုအလေ့အကျင့်များဖို့မတူဘဲ, ostentatious ဖော်ပြထားနိုင်သမ္မာသတိ၏လူနှစ်ယောက်တစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာပေါကျနိုငျသညျ။ ထိုအခါခြေမ "အားလုံးအဆက်အသွယ်" ဆန့်ကျင်ယူပါ။ တဦးတည်းအခြမ်းတွင် Kais Saied, Sousse တက္ကသိုလ်မှကျိုးနွံဥပဒေပညာရှင်အငြိမ်းစားဟောင်းသူဌေးက။ အခြားတွင်, Abdelkarim Zbidi ဟောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး။ သူတို့ရဲ့သင်ကြားရေးစတိုင်နှင့်အတူပိုမိုပညာတတ်ပရိသတ်တွေလှည့်ဖြား။ Saied ငယ်ရွယ်အလုပ်လက်မဲ့ဘွဲ့ရများနှင့်တောင်းဆိုနေတာကွန်ဆာဗေးတစ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်။ Zbidi သည်သူမန်နေဂျာများနှင့်ဝါရင့်နိုင်ငံသားတွေကြောက်ရွံ့မှုကိုပြေ။ သူတို့၏ "Anti-com" မဲဆန္ဒရှင်မှကြည်ဖြူ၏ယူဆသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ၏ရလဒ်များကိုသာလာတူနီးရှားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှု၏မေးခွန်းကိုအနည်ထိုင်ရန်။ သူတို့ကအစအားလုံးအစင်း၏ဆက်သွယ်ရေးသင်ခန်းစာတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။ သူမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်း၏မည်ခြောကျခြားဖွစျပွီး? ဒါဟာတူနီးရှားကိုတုံ့ပြန်ရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်သောဤမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။
သမ္မတအိမ်တော်တူနီးရှား - Kais Saied: "ကျနော်တို့ကစနစ်ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလက်ခံပေမယ့်မထားရပါ" - JeuneAfrique.com